नेपाली आयुर्वेदिक औषधिले सात दिनमै निको भए ३३ कोरोना स*ङ्क्रमित – Butwal Sandesh
नेपाली आयुर्वेदिक औषधिले सात दिनमै निको भए ३३ कोरोना स*ङ्क्रमित
आयुर्वेद चिकित्साप्रति मानिसको विश्वास गुमिरहेको समयमा कोरोना स*ङ्क्रमण भएका बिरामीलाई भने आयुर्वेदिक औषधिले फाइदा गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोना स*ङ्क्रमित ३३ जना सात दिनमै निको भएर घर गएका छन् । अरु पनि निको भएर जाने क्रम बढ्दो छ।
उहाँका अनुसार कोरोना स*ङ्क्रमणका कारण भर्ना भएपछि आयुर्वेद विज्ञ चिकित्सक टोलीबीच छलफल गरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग हुने र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी मिलाएर बनाइएको औषधि सेवन गर्न दिइएको थियो । त्यसको सात दिनपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा.जोशीले जानकारी दिए।
कोरोना स*ङ्क्रमण पुष्टि भएपछि भक्तपुरकी २२ वर्षीय नर्स कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो । आफूले बिरामीलाई एलोपेथिक औषधिमात्र सेवन गर्न दिने गर्ने गरको उहाँले कहिले पनि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नुभएको थिएन । आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको सल्लाहबमोजिम सोही औषधि सेवन गरको र अहिले आफूलाई समस्या नभएको बताए।
गत असार २५ र २६ गते भर्ना भएका उनीहरू एक हप्तामै डिस्चार्ज भएको अस्पतालले जनाइएको छ । डा.जोशीले पहिलोपटक भर्ना भएका २० जना कोरोना सङ*क्रमित व्यक्तिहरू सबै डिस्चार्ज भएकाे बताउनुभयो । त्यसलगत्तै दोस्रोपटक पनि २० जना भर्ना भएकाे थियाे । जसमा १४ जना डिस्चार्ज भइसकेको जानकारी दिए।
आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका चिकित्सक तथा कोभिड-१९ का संयोजक डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले हाल अस्पतालमा १६७ जना रहेको जानकारी दिँदै थपे, ‘पुरुष १२१ र महिला ४७ जना उपाचारमा रहनुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि सोही औषधिको प्रयोग गरिरहेका छाैँ । सबैको अवस्था सामान्य नै रहेको छ ।’ अहिलेसम्म दुई जनालाई गङ्गालाल अस्पताल र एक जनालाई आइसियुको लागि टेकु पठाइएको उनले बताए ।
भर्ना भएकामध्ये तीन जनामा मात्र सामान्य रुघाखोकी, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आउनेजस्ता मध्यम लक्षण देखिएका थिए भने अरूमा खासै लक्षण नदेखिएकाे डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार भर्ना भएका सबैलाई स्वस्थ पार्ने विषयमा केन्द्रका विज्ञ चिकित्सकबीच छलफल गरी स*ङ्क्रमितलाई विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि दिइएको हो ।
टोलीमा काया चिकित्सक, पोषणविद्, द्रव्यगुण चिकित्सक, शल्यविज्ञलगायत मिलेर औषधि छनोट गरिएको थियो । डा. जोशीले स*ङ्क्रमितलाई शरीरको प्रतिरक्षा शक्ति बढाउन गुर्जो, पिप्ला, अश्वगन्धा, तुलसी सुतमनी, मरिजलगायत जडीबुटीबाट बनेको औषधि खुवाइएको जानकारी दिए । औषधिका साथै खानामा पनि ध्यान दिएको प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘कोरोना स*ङ्क्रमणलाई भिटामिन सी, खनिजमा जिङक र सेलेनियम भएको त्यसै अनुसारको खाना मिलाएर दिने गरेका छौँ ।’
डा.श्रेष्ठ भने खाना र औषधिको साथै मेडिटेसन, सामान्य नाचगान तथा योगा गर्नको लागि मौखिक रुपमा भन्नुभएको जानकारी दिइएकाे बताए। आयुर्वेदिक विधिबाट छोटो अवधिमै सङ्क्रमित स्वस्थ भएपछि यसलाई थप अनुसन्धानका रूपमा प्रयोग गर्ने सोच बनाइएको उनले बताए। ‘यो औषधिले कोरोना निको नै भयो भन्ने हाम्रो दाबी होइन, तर बिरामीलाई लाभ मिलेको देखिन्छ । यसमा अनुसन्धान गर्नेबारे छलफल क्रममा छौँ,’ जोशीले थपे।
सानो स्वास्थ्य टोली हुदाँहुदै पनि राम्रो काम भइरहेको उनले बताए । जनशक्तिको कमीले असहज भएको गुनासो गर्दै डा. श्रेष्ठले भने, ‘स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्यकर्मी पठाइदिने कुरा भइरहेको छ ।’ गोरखापत्र दैनिकमा यलु जोशीले खबर लेखेका छन् ।